जब्बर झम्की आमा: “आमा अब जाम हिँड्नुहोस् घर, यहाँ बस्नुहुन्न” – live 60media
जब्बर झम्की आमा: “आमा अब जाम हिँड्नुहोस् घर, यहाँ बस्नुहुन्न”
सर्लाही, पुस १६ गते । “पाल्ने भए यत्रो साल कहाँ गएका थियौ, किन नलगेका, तिमीहरु पाल्न होइन मलाई लुट्न आएको हो, ए भाइ हो (गाउँलेलाई देखाउँदै), यिनीहरु चोरी गर्न लागे, मलाइ बचाऊ… ।”
जाडो मौसम भएकाले चोकमा आगो फुसफुस बलेर ताप्दै गर्दा उहाँलाई बुधबार उद्धार गरिएको थियो । डोरीको एक छेउ उहाँको कम्मरमा र अर्काे छेउ बच्चैदेखि पालेको कुकुरको घाँटीमा बाँधिएको थियो । छिमेकीका अनुसार उहाँले त्यो कुकुर बच्चैदेखि पाल्नुभएको हो । छेउको अर्काे
← अहिले यी पुरानो नोटको भाउ लाख भन्दा पनि बढी छ ! भयकोले तुरुन्तै यसरी बेचौं ! कहाँ कसरी ? बेच्ने तरिका..हेर्नुहोस्”
सुत्ने बेला सिरानी मुनी तुलसीको ५ पात राख्नुस अनि हेर्नुस चमत्कार ! →